Tag: tahan'ny fihenam-bidy | Martech Zone
Tag: taha ambony
Alarobia, Desambra 9, 2020 Alarobia, Desambra 9, 2020 Douglas Karr
Ny tahan'ny fihenam-bidy dia iray amin'ireo KPI izay lanin'ny mpivarotra dizitaly fotoana betsaka amin'ny famakafakana sy ezahana hatsaraina. Na izany aza, raha tsy azonao tsara ny atao hoe bouncing, dia mety ho diso ianao amin'ny fanandramanao manatsara azy. Handeha hamakivaky ny famaritana ny tahan'ny fihenam-bidy aho, ny nuances sasantsasany ary ny fomba sasany hanatsaranao ny tahan'ny fitroarana. Famaritana ny tahan'ny famoahana ny bouncing dia fizarana iray pejy amin'ny tranokalanao. In
Zoma Janoary 20, 2017 Sabotsy, Janoary 21, 2017 Douglas Karr
Androany, nanana antso mahafinaritra izahay niaraka tamin'ny orinasa iray izay niresahanay ny paikadim-pikarohana biolojika lalina (natao ho an'ny tanjona). Na dia isan-jaton'ny mpanjifanay sy fidiram-bola mifandraika aza dia avy amin'ireo orinasa mitady ny fahaizanay SEO, dia tsy nino ny SEO foana izahay. Tsy hoe tsy fantatsika ny herin'ny fikarohana biolojika - paikady ifotony tanteraka ho antsika ny mitondra fahefana ary mitarika ny mpanjifantsika. Nilaozanay ny fanandramana
Alakamisy, Jona 9, 2016 Zoma, Jona 10, 2016 Douglas Karr
Ny marketing amin'ny atiny dia fehezan-teny KPI efa be loatra ampiasaina, voadinika, ethereal KPI amin'ny marketing izay lasa tamin'ny famaranana lojika, ny tompona orinasa dia manao bilaogy momba ny lohahevitra tsy mahaliana mba hampifandraisana na hitazomana ny tranonkalany ho vaovao. Ny votoatiny dia tsy midika ho famaranana Taona lasa izay, tian'i Google ny manome laharana tranonkala lehibe kokoa misy atiny bebe kokoa. Izany dia mitarika ny bilaogera, ny mpiara-miasa ary ny tompona orinasa mamoaka ny atiny tsy dia mahazatra ad nauseam, miaraka amin'ny fanantenana ho avy